DAAWO MUUQAALKA: Puntland oo gurmadkii ugu horreeyay u dirtay Walaalahood reer Baledweyne | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO MUUQAALKA: Puntland oo gurmadkii ugu horreeyay u dirtay Walaalahood reer Baledweyne
DAAWO MUUQAALKA: Puntland oo gurmadkii ugu horreeyay u dirtay Walaalahood reer Baledweyne
Madaxweyne Ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweyne Ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka qayb galay sagootinta wejiga 1-aad ee Gurmadka Puntland ee walaalaha Baledweyne.
Sagootinta Gurmadka reer Putland ee walaalaha Baladweyne ayaa waxaa Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ku wehelinaayey Masuuliyiin ka tirsan Golaha Xukuumadda iyo Wakiillada, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada, dhallinyarada qaybta ka ahayd Gurmadkaasi, samafalayaal iyo masuuliyiin kale.
Sidoo kale, Madaxweyne Ku xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dedaalka, dhiiranaanta damqashada iyo gurmadka ay u horseedeen dhallinta reer Puntland ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan u gurmashada shacabka reer Baladweyne.
SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulankii maanta ee madaxweyne Farmaajo iyo madax ka socotay Bangiga Adduunka?
XOG: Madaxweynihii hore ee Galmudug ‘Guuleed‘ oo War culus ka soo saaray Xaaladda Galmudug
DHAGEYSO: Guddoomiyaha Dhuusamareeb ee Ahlu sunna oo si weyn u taageeray DF Somaliya
UPDATE: Maxkamad hor istaagtay go’aankii Trump ee ku saabsanaa Muhaajiriinta Mareykanka
XOG LA HELAY: Sirdoon soo ogaaday goobta Al-Shabaab ay ku diyaariyaan qaraxyada miinooyinka, waa halkee?
Axmed Cilmi Cismaan Karaash
gurmadkii ugu horreeyay
u diray Baledweyne